Xiaomi ရဲ့ ကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ Tablet ထွက်ဖို့လမ်းစလား? | MyTech Myanmar
Xiaomi ရဲ့ ကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ Tablet ထွက်ဖို့လမ်းစလား?
Consumer Electronic Show (CES 2019) ပွဲစဖို့လည်း ရက်ပိုင်းလောက်ပဲ လိုပါတော့တယ်။ ဒီချိန်က ဘယ်ကုမ္ပဏီက ဘာပစ္စည်းတွေ ဘယ်လိုထွင်လာမလဲဆိုတာ Rumors တွေစောင့်ပြီး ရင်ခုန်နေရတဲ့ အချိန်ပါ။
အရင်နေ့ကလည်း Galaxy S10 ရဲ့ ပုံစံဆိုပြီး Leak တွေ ထွက်ခဲ့ပြီးတော့ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြား ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ တစ်ခု သတင်းထွက်လာခဲ့ပါပြီ။
၂၀၁၉ ရဲ့ Trend တစ်ခုက ကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ဖုန်းတွေ ဖြစ်လာဖို့လည်း များပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့ ကွေေးခါက်နိုင်တဲ့ တကယ်ကို ကွေးခေါက်ပစ်လိုက်လို့ရတဲ့ Tablet တစ်လုံး ထပ်ထွက်လာမယ် ဆိုရင်ရော?
Leak သတင်းတွေ ထွက်တဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ အမြဲလည်းမှန်တဲ့ Evan Blass ကတော့ ခေါက်လိုက်ရင် ဖုန်းတစ်လုံးလို ဖြစ်သွားလောက်အောင် သပ်သပ်ရပ်ရပ် ကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ Android Tablet တစ်လုံးကို ဗီဒီယိုလေး တင်ထားပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်ဖုန်းလေးပါဆိုပြီး ထုတ်မပြောနိုင်ပေမယ့် Xiaomi က လုပ်ထားတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့ ပြောထားပါတယ်။ တကယ်လည်း Xiaomi က ထုတ်တာဖြစ်ဖို့တေ့ာ များပေမယ့် သေချာပေါက်ကတော့ ကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ Tablet ဖုန်းတစ်လုံး ထပ်မြင်ရဖို့ လမ်းစတော့ ပေါ်လာပါပြီ။
၂၀၁၉ ရဲ့ Trend ဆိုတဲ့အတိုင်း မနှစ် နိုဝင်ဘာတုန်းကလည်း Samsung ကနေ သူ့ရဲ့ Flex Display နည်းပညာကို ချပြသွားခဲ့ပြီး CES 2017 တုန်းကလည်း Lenovo က ကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ Concept Device တစ်လုံးကို ချပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
ထူးခြားတာက Samsung တို့ Lenovo တို့ရဲ့ အဲဒီကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ ဖုန်းတွေက တစ်နေရာတည်းကနေ ခေါက်ပြီး ၂ခြမ်းဖြစ်သွားတာမျိုး ဖြစ်ပေမယ့် ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ ၂နေရာတောင် ကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ Tablet ဖြစ်နေတော့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ချီးကျူးမိပါတယ်။
ဖန်တီးထားတဲ့ Video လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် လာမယ့် 2019 CES ပွဲမှာ တကယ်တွေ့ရမလားဆိုတာကိုတော့ ရင်ခုန်စွာ စောင့်ကြည့်ကြရအောင်..
Consumer Electronic Show (CES 2019) ပှဲစဖို့လညျး ရကျပိုငျးလောကျပဲ လိုပါတော့တယျ။ ဒီခြိနျက ဘယျကုမ်ပဏီက ဘာပစ်စညျးတှေ ဘယျလိုထှငျလာမလဲဆိုတာ Rumors တှစေောငျ့ပွီး ရငျခုနျနရေတဲ့ အခြိနျပါ။
အရငျနကေ့လညျး Galaxy S10 ရဲ့ ပုံစံဆိုပွီး Leak တှေ ထှကျခဲ့ပွီးတော့ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ ထူးထူးခွားခွား ပိုစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာ တဈခု သတငျးထှကျလာခဲ့ပါပွီ။
၂၀၁၉ ရဲ့ Trend တဈခုက ကှေးခေါကျနိုငျတဲ့ဖုနျးတှေ ဖွဈလာဖို့လညျး မြားပါတယျ။ ပိုကွီးတဲ့ ကှေေးခါကျနိုငျတဲ့ တကယျကို ကှေးခေါကျပဈလိုကျလို့ရတဲ့ Tablet တဈလုံး ထပျထှကျလာမယျ ဆိုရငျရော?
Leak သတငျးတှေ ထှကျတဲ့နရောမှာ နာမညျကွီးတဲ့ အမွဲလညျးမှနျတဲ့ Evan Blass ကတော့ ခေါကျလိုကျရငျ ဖုနျးတဈလုံးလို ဖွဈသှားလောကျအောငျ သပျသပျရပျရပျ ကှေးခေါကျနိုငျတဲ့ Android Tablet တဈလုံးကို ဗီဒီယိုလေး တငျထားပါတယျ။
ထုံးစံအတိုငျး ဘယျဖုနျးလေးပါဆိုပွီး ထုတျမပွောနိုငျပမေယျ့ Xiaomi က လုပျထားတာ ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျတယျလို့တော့ ပွောထားပါတယျ။ တကယျလညျး Xiaomi က ထုတျတာဖွဈဖို့တေ့ာ မြားပမေယျ့ သခြောပေါကျကတော့ ကှေးခေါကျနိုငျတဲ့ Tablet ဖုနျးတဈလုံး ထပျမွငျရဖို့ လမျးစတော့ ပျေါလာပါပွီ။
၂၀၁၉ ရဲ့ Trend ဆိုတဲ့အတိုငျး မနှဈ နိုဝငျဘာတုနျးကလညျး Samsung ကနေ သူ့ရဲ့ Flex Display နညျးပညာကို ခပြွသှားခဲ့ပွီး CES 2017 တုနျးကလညျး Lenovo က ကှေးခေါကျနိုငျတဲ့ Concept Device တဈလုံးကို ခပြွခဲ့ဖူးပါတယျ။
ထူးခွားတာက Samsung တို့ Lenovo တို့ရဲ့ အဲဒီကှေးခေါကျနိုငျတဲ့ ဖုနျးတှကေ တဈနရောတညျးကနေ ခေါကျပွီး ၂ခွမျးဖွဈသှားတာမြိုး ဖွဈပမေယျ့ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ ၂နရောတောငျ ကှေးခေါကျနိုငျတဲ့ Tablet ဖွဈနတေော့ ဖနျတီးနိုငျစှမျးကို ခြီးကြူးမိပါတယျ။
ဖနျတီးထားတဲ့ Video လညျး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပမေယျ့ လာမယျ့ 2019 CES ပှဲမှာ တကယျတှရေ့မလားဆိုတာကိုတော့ ရငျခုနျစှာ စောငျ့ကွညျ့ကွရအောငျ..
MyTech Myanmar2019-01-04T13:02:25+06:30January 4th, 2019|Mobile Phones, News, Tablets, Xiaomi|